AMD vakave nokubudirira kukuru gore rino rapfuura nekwakagadziridzwa kweZen CPU yavo yakakwana. Chokutanga, vakatipa Ryzen uye kutarisa kwedu pakutanga kwechikwata chekuvaka chivako che AMD chinoshandisa CPU Complexes (CCX), dombo rekona rekugadzira kwavo, uye Infinity Fabric iyo inobatanidza "matombo" aya pamwe chete. Iyi nzira inobvumira AMD kuti iite "kuvhara" aya mana emakona, masere masere eCCX pamwe chete kuti awedzere nhamba yepamusoro. Tora Threadripper CPU neyese yakawanda yeC16 uye tsvina ye 32 kana seyiyi, tumira CCX kuRadeon Vega mifananidzo yekodzero uye uvandudze mapepa awo APU.
Nhasi ndinayo AMD Ryzen 5 2400G uye Ryzen 3 2200G pabhenji rekuongorora. Izvi ndezveruzhinji zveEAM, zvese zvakarongedzerwa maererano neZen Architecture uye Radeon Graphics kushandura code-inonzi Raven Ridge. AMD yakawana kuburikidza nekutsvakurudza kwakazvimiririra apo PC dzakatengesa pasina discrete graphics makadhi makeup 30% yemusika uye kuwedzerwa kwe APU ye Ryzen Family kwaizonyatsokodzera chikamu ichi.
Nekutengeswa kwemari ye $ 169.00 yeRenzen 5 2400G uye $ 99.00 yeRenzen 3 2200G, AMD yakagadzirisa purogiramu yematengo asingatsvaki GPU yakatsaurirwa. Mukuedza kwe AMD, Ryzen 5 2400G APU inowanzofananidza ne $ 75 GPU yakatsaurirwa inoita iyi APU chisarudzo chakanaka kana zvasvika pakushanda kwe dollar kune vatengi vanoziva mutengo. Izvozvi APU mbiri dzichazopedzisira dzatsiva Ryzen 5 1400 uye Ryzen 3 1200 nemitengo yakafanana kana yepamusoro inoratidzirwa, mazamu epamusoro uye ekusimbisa maawa, uye maikirwo akabatanidzwa Iko kuwedzera kwepanyama.
Tichitarisa tafura yezvakanyorwa pasi, 2400G inonzi quad-core ne SMT yezvikamu zvisere zvese. Iyi yose yenhamba / tsvuku kuverenga inobva pakushandiswa kweimwe CPU Complex (CCX) ne SMT inoshanda. Nheyo yekasi inouya mu3.6 GHz uye ichawedzera ku 3.9 GHz paIndaneti yakanatsiridza AMC ye Precision Boost 2 (zvimwe pane izvi gare gare). I2400G APU inosanganisira 11 Radeon Vega Compute Units yakavharwa kusvika 1250 MHz. I2200G inovakwawo paCCX imwe yemakumbo mana asi SMT haina kushanda pane iyi SKU. Iko yevha yevhavha inouya ku3.5 GHz uye ichawedzera ku 3.7 GHz neChristian Precision Boost 2 uye inosanganisira hupfumi Radeon Vega Compute Units yakavharwa kusvika 1100 MHz.
Zvose izvi zvinokonzerwa ne AMD's 14 nm FinFET inotanga neTDP (Thermal Design Power) ye65 W. Pakati yekunakisa pakati pekufa neHS ndiyo TIM (Thermal Interface Material) panzvimbo yekutsemuka, AMD yakasarudza nzira iyi kuchengetedza mari yekugadzira pasi uye chengetedza mutengo wokukwikwidza.
Pane zvipo pakushandisa CCX imwechete seyodhura yakaderera uye huwandu hwakawanda hunogadzirisa hunoita kuti huve hwakakodzerwa nedesktop pamwe neshamba dzemagetsi. Izvi zvinotungamirirawo kuvandudza latency pamusoro peCCX CPU mbiri asi pane zvimwe zvisingabatsiri. Izvi zvinoderedza chikwata cheL3 kubva ku8MB kusvika ku4 MB iyo AMD yakagadzirisa nepamusoro ma CPC maawa. Izvo itsva CPU package inobvumirawo Raven Ridge kutsigira zviri pamutemo JEDEC DDR4-2933, iyo yepamusoro yepamusoro yekucherechedza clock yevashandi vese.
Nezve PCI Express (PCIe) kutsigirwa, Raven Ridge inopa zvikamu zve24 zvachose kunze kweCUU ine hupfumi dzakatsaurirwa mavara uye hupfumi nokuda kwekushandiswa kwakawanda saMexNUMX PCIe NVMe (vana vevaya vasere vakatsaurirwa chipset). Zvasara zvinoparadzaniswa pamusoro peSATA uye USB 2, 2.0 uye 3.1 Gen3.1 kushanda. Chisarudzo che AMD chekudzikisa mapepa emagetsi ePII kubva kune gumi nematanhatu kusvika kune masere kunobva pakati pepakati peGPU uye basa rinogona kuwirirana ne APU. Izvo zvakanyanyisa, zviri nyore kuumba kubvumira AMD kuderedza vatengi mari.
Windows 10 ndiyo chikwata chinotsigirwa zvakasungirirwa cheRive APUs. Parizvino, hazvina kunyatsojeka kana kuti kwete chero inhaka yekushanda Systems yakafanana Windows 7 richasimbiswa.
APU AMD Ryzen 5 2400G AMD Ryzen 3 2200G
# of Threads 8 4
Base Clock Dhigiri 3.6 GHz 3.5 GHz
Boost Clock Speed 3.9 GHz 3.7 GHz
Transistor Count 4.94 mabhiriyoni 4.94 mabhiriyoni
Thermal Solution Spec Tsika dzisina tsika dzeTIM Tsika dzisina tsika dzeTIM
Integrated Graphics 11 Radeon Vega CUs Kusvikira ku 1250 MHz 8 Radeon Vega CUs Kusvikira ku 1100 MHz
L1 Cache 64 KB I-Cache
32 KB D-Cache neCore 64 KB I-Cache
32 KB D-Cache neCore
Mamwe Memory DDR4-22933 DDR4-22933
Tafura iri pasi apa inorongwa re Ryzen APU desktop lineup yakagadzirirwa mavhidhiyo matsva eWDD Radeon Vega. Mariri, tinoona Ryzen 5 2400G ndiyo yepamusoro uye ine nheyo-mana, hupfumi, sarudzo uye 11 Radeon Vega maumbirwo akaiteverwa akatevera Ryzen 3 2200G nemakumbo mana, mativi mana, uye hupfumi Radeon Vega akaenzanisa. Zvose zviviri zveCUU zvakanyanyisa, zvichifunga kuti iwe unotenga mamabhobho ane chipset inokwanisa kuita kudaro.
AMD Ryzen APU Model
Ryzen 5 2400G 4 / 8 3.6 GHz 3.9 GHz 4 MB Wriath Spire 11CU 1250 MHz 65W
Ryzen 3 2200G 8 / 16 3.5 GHz 3.7 GHz 4 MB Wriath Spire 8CU 1100 MHz 65W
Mashoko anotevera akapiwa ne AMD.
Chokutanga uye zvakakosha, zvakakosha kunzwisisa kuti rimwe nerimwe AMD Ryzen rinoparadzirwa "smart grid" yezvinokonzera zvinopindirana zvakarurama kune 1 mA, 1 mV, 1 mW, uye 1 ° C pamwe nekuwedzerwa kwekutsvaga kwe1000 / sec. Izvi zvinokonzera nheyo dzinokosha dze telemetry dzinopinda muInfinity Fabric control loop, uye inonzi control loop inopiwa simba rekugadzirisa nguva chaiyo kumamiriro ekushandurwa kwe AMD Ryzen zvichienderana nemamiriro ezvinhu epanguva ino uye anotarisirwa kushanda.
AMD SenseMI iyi yepakati ye "nzwisiso" shanu dzakabatana dzinotsigirwa nemagadzirirwo akaoma ekudzidza mashandisirwo uye / kana mutemo-uye-kudzora kushanda kweInfinity Fabric kuti ipe simba AMD Ryzen processors neChina Intelligence (MI). Uku kungwara kunoshandiswa kurongedza maitiro uye masimba maitiro emakwenzi, kutarisira zvikwereti zvekuchengetedza zvishoma, uye kuita AI-based branch prediction.
Izvo zvakagoverwa mitambo yezvinonzwisisika zvinokonzera Precision Boost inogona kuita basa rinowedzera kukonesa kushandiswa kwesimba reprotori nemumwe mutoro webasa rakapiwa. Uye nokuda kwehupamhi-huno: nhare ye telemetry kubva kuPure Power optimization loop inobvumira imwe nharo ye AMD Ryzen kuti iongorore unhu hwakasiyana-siyana hweyoyo silicon kuti ibudise hutungamiri humwe simba.
Kuchengetedza Kuwedzera 2
Mushure mekuzarura kwe Precision Boost uye AMD Ryzen desktop processor, AMD yakachengeta mamiriro ezvinhu apo 3 + cores iri kushandiswa, asi huwandu huwandu hwehuwandu hwemabasa hwakawanda. Izvi zvinogadzira mamiriro ezvinhu apo "humwe humwe hukuru hwekusimudzira" hunokonzerwa, kunyange zvazvo pasina magetsi emagetsi, anoshambidza, kana kuti kushandiswa ayo angangodaro anonoka mamwe maawa ekuwedzera. Ichi chiitiko chinomiririra mukana wekufambisa kushanda kwakakwirira. Imhepo inopisa, magetsi, uye kushandiswa kwechigadzirwa ichi inogona kushandurwa kuva yakakwirira yeawa yepamhanho kuti iwane mukana wekuti Precision Boost 2 inofambisa mberi 25 MHz granularity yayo yakatangira, asi zvakakosha kuchinja kune imwe sargorithm inonyatsotevera kutevera kusvikira muganhu wambotaurwa unosangana, kana kuverengwa kwezvikamu zvechikamu chacho zvinosangana (chero chero chinouya pakutanga). Izvi zvinoshanda kune nhamba ipi zvayo yehurukuro dziri mundiza, pasina mitsara isina kukwana. Kugadziriswa Kwekuwedzera 2 kunogona kurondedzerwa sechinhu chinotarisirwa, chinopesana, kana chakanakidza, uye kuenzanisa kwekodzero ye Precision Boost 1 VS 2 yakarongerwa kutsanangurwa pasi apa.
Kana ikasarudzwa ye hardware, Precision Boost 2 yakagadzirirwa kurega uye kushandura kusarudzwa kwayo kwemaawa ekugadzirira kuti iende pane imwe nzvimbo shomanana yepamhanho inotarisana nekukwira kwepamusoro. Izvi zvinongoramba zvichigadziriswa loop inotungamirirwa ne AMD Infinity Fabric, uye inotenderera kusvika ku1000 nguva nenguva yechipiri. Muenzaniso wenyika chaiwo weizvi unoratidzwa pasi apa neOCCT, uko kukurudzira kunoshandura nenzira dzakanaka kune imwe chete kusvika kune hupfumi uye zvino kuchengeta max-thread speed clock zvakanaka pamusoro pedenga. Zvinotorwa seScredic Boost 2 inotengeserana AMD Ryzen Processor neRadeon Vega Graphics pamwe nekushanda kwakanyanya munyika chaiyo-yakawanda yakasungwa nekusunungura CPU kuti iite sarudzo yakanakisisa yeawa yekuti inotsanangurwa magetsi / kutsika / mutoro - pasinei nehuwandu hwehurukuro.
Neural Net Kutaura
Ichokwadi cheAI mukati meIndaneti yose yeYYEN Processor harnesses neural network kuti iite zvidzidzo zvemazuva ano zvekuita kwekuita uye inofungidzira pane inotevera inofamba. The predictive AI inodzokorora mazano anokosha eCUU kuitira kuti purogiramu igare yakagadzirirwa kutarisira basa idzva.
Dzidzo yepamusoro yekugadzirisa zvinyorwa kunzwisisa maitiro uye mukati mezviito zvekushanda uye kutarisira kuti chii chichadiwa kuti uite nokukurumidza mune ramangwana. Smart Prefetch predicatively inotakura zvinhu izvozvi mumakata makuru pamusana we AMD Ryzen kuti iwanike nekukurumidza nekuteerera computing.
SMT (Multi-Threading imwecheteyo)
Izvi ndizvo zvitsva zve AMD zvakaenzana neIntel's HyperThreading (HT) teknolojia. Iyo inobvumira imwe nheyo kuti iite semashonga maviri, kuwedzera kushanda mumabasa akawanda akaiswa.
Zvose zvinodhindwa hazvibvumirwi
AMD iri kubvumira kudarika kune vose CPU models, zvakadai sezvavaiva nazvo munguva yakapfuura. Iko chete yevhavha ino nguva yakapoteredza iwe unofanirwa kuva nebhobho rebhobho rine chipset rinotsigira overclocking (X370, B350, kana X300).
I "Zen" X86 Microarchitecture
Pamusana pechiratidzo, Zen micro-architecture inomiririra kuwandisa kwepamusoro pakudzika kwekugona kukwanisa kupikisana neAIMD yakagadzirwa ma desktop. Zvinonzwisisika, chivakwa cheZen chinoshandisa 1.75x huru yekudzidzisa shandisi hwindo uye 1.5x huru huru yakakura uye zvigadziro; shanduko iyi inobvumira Zen kuronga uye kutumira mamwe mabasa muzvikamu zvekuuraya. Uyezve, cache micro-op inobvumira Zen kudarika L2 uye L3 cache pavanoshandisa kazhinji-yakawanikwa micro-operation. Zen anowanawo neural network-based branch prediction unit iyo inobvumira kuti Zen architecture ive yakangwara pakugadzira mirayiridzo yakakwana uye nzira dzebasa remangwana. Pakupedzisira, zvigadzirwa zvinobva pahutano hweZen zvinogona kushandiswa kushandiswa SMT kuti kuwedzere kushandiswa kwekushandisa pipeline nekuzadza mapurogiramu emapipi emagetsi ane basa rine chinangwa.
Injini yakawanda inobatsira inoda mafuta, uye hutano hweZen hwekugadzira humbo hunounza munyaya iyi. Mutungamiri pakati pekushandurudza ndeyekushandurwa kukuru kwekuchengetedza hutungamiri nemhando yakatsaurirwa 64 KB L1 mirayiridzo uye cache data, 512KB yakatsaurirwa L2 cache pamusi wekutanga, uye 8 MB yeL3 cache yakagoverwa pamakumbo mana. Ichi chinyorwa chinowedzera nefundo yakanakisisa yekudzidza yakagadziridza iyo inogadzirisa zvinyorwa zvinoshandiswa nedhidhiyo yekushandisa mumakata kuitira kuti iwanikwe nokukurumidza kuurayiwa. Zvose, kuchinja uku kunogadzirisa hutsika hwepamusoro hwepamusoro pedo nechokuita netting kusvika ku 5x huwandu hwechikwata chechikwata chemukati.
Kunze kwekugamuchira simba rakawanda rinogadzirwa 14 nm FinFET, hurongwa hweZen hunoshandisa zvakananga shanduro-yakagadziridzwa yeWorld Foundries 14 nm FinFET. Izvi zvinobvumira kuti zviduku zvive zvishoma uye zvishoma zvishoma zvinoshandiswa zvibvumirano kune simba rakazara / rushandi rwekuita. Shanduro yeZen inosanganisira nzira dzekupedzisira dze AMD dzekugadzira masimba, zvakadai se: inonzi micro-op cache yakambotaurwa kare kuderedza simba-yakakura yemafetasi akareba, nguva inotyisa inobata zero simba rine simba rinoshandiswa munzvimbo dzinoshandiswa zvikamu zvepakati, uye injini yeakaderera-nheyo yekodzero yekodzero mumusangano.
Inzvimbo ino, kunyanya, kuti simba rekushandisa huchenjeri hwema AMD's APU rinopenya kuburikidza nekupa Zen kukwanisa kuwedzera kubva kune-low-wattage mobile kuenda kuhutano hweHEDT.
Kubudirira muhutano hweZen hunotanga neC CPU Complex (CCX), natively ine nheyo ina yechina ye thread thread. Zvose CCX ine 64 KB L1 I-Cache, 64 KB L1 D-Cache, 512 KB yakatsaurirwa L2 cache pamusana, uye 8 MB L3 cache yakagoverwa pamakumbo. Nhengo imwe neimwe iri mukati meCCX inogona kunge yakasarudza SMT yezvikwata zvinowanikwa zvakasiyana-siyana.
Zvinopfuura imwechete CCX inogona kuvapo mune Zen-based product, umo inonzi AMD Ryzen processor inoshandisa maCCX maviri ane mapeji masere uye tambo 16 (chizere). Mamwe mapepa mukati meCCX angave akaremara ne AMD, uye CCX inotaurirana kune imwe yakakwirira Infinity Fabric. Iyi modular inoita kuti AMD ikwanise kuisa mhando, tsvina, uye zvinyorwa zvakakosha sezvinodiwa kuti zvive nehuwandu hwehuwandu hwemaklayiti, server, uye HPC misika.
The Infinity Fabric, panguva iyi, inoshandiswa uye inogadzirisa maitiro / bhasi iyo inobvumira AMD kuti ikurumidze uye inogadzirisa kuwedzera purogiramu yakaisvonaka yePI muhutano hunofa. Izvi zvikamu zvinounganidza zvinogona kushandisa Infinity Fabric kuchinjana dhana pakati peCCX, system memory, nevamwe vatongi (semu memory, I / O, PCIe) iripo pane AMD Ryzen SoC. Infinity Fabric inopawo mazano eZen mazano ane simba uye masimba ekugadzirisa, kugadzirisa pfungwa inonzwisisika inopindira iyo inobvumira kutaridzika kwemazuva chaiyo uye kugadziriswa kwepfungwa huru, kutonhorera, kutora simba rekutora, clock speed, nezvimwe. Uyu murairo uye kutonga kushanda kunobatsira teknolojia ye AMD SenseMI.
Vega Graphics Architecture
Makore makumi manomwe nemanomwe kubvira pakatanga yeRadeon yekutanga, kushandiswa kwemuenzaniso wekugadzira mapikisi kunoramba kuchiwedzera, zvose mukati memamiriro ekuona computing uye kupfuura. Vashandi ve AMD vari kushandisa GPUs kutarisa zvakasiyana-siyana zvemabasa ekufambisa kubva kumichina yekudzidza kusvika pakuona maitiro uye kushandiswa kwepamusoro-kugadzirisa mamiriro matsva sezvinongoitika chaiye. Kunyange kutamba mitambo nguva dzose kunokonzera vhokupepe ine kucheka-maziso ekuona zvinhu uye zvisati zvaitika kare maonero ekutenderera mumitambo yemazuva ano. Pamwe munzira, data inogadziriswa kuti iongororwe mune izvi zvinoshandiswa yakawanda muhukuru uye kuoma. Simba rinoshandiswa reGPUs rakawedzera kuti rirambe richifambidzana nezvinodiwa zvekuwedzera kwebasa rekushanda, asi kuputika kweavo marudzi ose e-high-performance processor kwave ichiwedzera kuwedzerwa nekushandisa simba.
Nezvido izvi mupfungwa, Radeon Technologies Group yakagadzirira kuvaka chivako chitsva chinonzi Vega. Vega ndiyo shanduko yakanyanya kukunda teknolojia yekodzero ye AMD kubvira pakatanga maGCN-based chips makore mashanu akapfuura. Urongwa hweVega hunotarisirwa kuzadzisa zvido zvemazuva ano kuburikidza nemitemo yakawanda; kushandiswa kwakagadziriswa, kutsigirwa kwemashoko makuru e data, kushandiswa kwesimba kwakagadziridzwa, uye kushandiswa kwakanyanya kwezvinhu, Vega inotanga boka rezvinhu zvitsva mukutsvaga kwechiratidzo ichi, chatichazochapa mumapeji anotevera. Iyi chivakwa chitsva chinopikira kuchinja nzira iyo GPUs inoshandiswa mune zvose zvakasimbiswa uye inowanikwa misika kuburikidza nekupa vashanduri maitiro matsva ekudzora, kushanduka, uye kugoverwa.
Chizvarwa Chinotevera Geometry
Kuti zvigadzirise zvido zvezvenyanzvi zvemagariro uye zvekugadzira maitiro, geometry injini muVega yakarongedzwa yepamusoro yepoloni kupinza kuburikidza nekuwedzera mitsva yakatsvaira nenzira ye hardware uye nekudzivisa kusakosha kusina kukodzera. Ichi chizvarwa chinotevera che geometry (NGG) nzira inonyanya kuchinja uye inogadziriswa kupfuura kare.
Kuti kusimbise chimwe chezvinhu zvitsva mu geometry injini itsva, primitive shaders ndiyo chinhu chinokosha mukukwanisa kwaro kupedza yakawanda yepamusoro pe polygon inotenderera kuburikidza nekushandura. Zvinyorwa zvekare zvakapoteredzwa zvakanyanya pedyo nemutauro wa Direct3D wokupa pipeline, ine zvikamu zvakasiyana-siyana kusanganisira kuungana kwevhisi, vertex shading, hull shading, tessellation, shading domain, uye geometry shading. Zvichibva kune zvakasiyana-siyana zvekugadzira mitambo ikozvino iri kushandiswa nevasimudzi, zvisinei, kusanganisira matanho aya haisi iyo nzira yakanakisisa yekuita zvinhu. Nharaunda imwe nechimwe ine mitemo yakasiyana-siyana pamusoro pemigumisiro uye zvigadzirwa zvingangodaro zvakakosha kune GPU yapfuura mazano, asi zvirevo zvakadaro hazvidiwi nguva dzose kune dzimwe nyanzvi hardware inochinja.
Vega's new primitive shader rubatsiro runobvumira zvimwe zvikamu zve geometry processing processing pipeline kuti zvibatanidzwe uye zvinotsiviwa nemhando itsva, yakanyatsogadzira shader. Izvi zvinogadziriswa, zvinogadzirisa-zvinangwa zvinogona kutanga zvakakurumidza, zvichibvumidza kanopfuura kaviri kupera kwepakupedzisira primitive shaders chibereko chekutanga chemaawa paawa yeawa.
Muchiitiko chinowanzoitika, inenge hafu ye geometry icharasirwa kuburikidza nemaitiro akasiyana-siyana akadai sekutsvaira kwepustum, kubvisa-chiso kumeso, uye kuderera-kutadza kwemazuva mashoma. Ikukurumidza idzi dzinotanga kubviswa dzichirasikirwa, inokurumidza GPU inogona kutanga kupa geometry inooneka. Uyezve, maitiro emasikiramu emagetsi anokanganisa mazamu mushure mekugadzirisa vertex apera, izvo zvinogona kuderedza kushandiswa kwemichina nekugadzirisa zvigadziri kana kuchengetedza huwandu hwemhando dzisina kukodzera. Primitive shaders vanobvumira kubvumira kare kuti vadzivirire iyo midziyo.
Primitive shaders inogona kushanda pamhando dzakasiyana dzakasiyana-siyana dzemakemikari ejometri, kusanganisira maziso, mapegoni, uye zvisikwa. Apo tessellation inobvumira, nzvimbo inogadzirwa inogadzirwa kuti ishandise mapepa uye mapepa ekutungamirira usati wapera tessellated, uye mapoloni emigumisiro anotumirwa anotumirwa kumucheto shader. Muchiitiko ichi, nzvimbo shader inosanganisira vertex shading uye hull shading zvikamu zve Direct3D graphics pipeline, asi chekutanga shader inotora nzvimbo ye shading uye geometry shading stages.
Geometry Engine Load Kuenzanisa ne NGG
Zvipfeko zvinoshandiswa zvinoshandiswa zvinogona kushandiswa kupfuura kwepamusoro-kuita ma geometry kukonzera. Shadow-mapeji ekushandura ndeimwe nzira inowanikwa yose injini dzemazuva ano dzinogona kubatsira zvikuru kubva kuderedzwa kushandiswa kwepamusoro kwemapfupa ekutanga. Tinogona kufunga nezvekushandiswa zvakanyanya kwekombiyuta iyi mune ramangwana, kusanganisira yakaderedzwa vertex maitiro ekuverengera, maonero mazhinji-maonero / mashandisiro ekugadzirisa maitiro, mashandisirwo emadziro-pre-passes, zvinyorwa zvese, uye full-scene graph processing nekufambisa paGPU.
Primitive shaders ichabatana nehutachiona che geometry pipeline panzvimbo yekuiisa mukutenderana neVega itsva yekuchengetedzwa kwemajeri, injini ye geometry inogona kushandisa iko-chip chip L2 cache kuchengetedza vertex parameter data. Urongwa uhwu hunozadzisa hutsananguro hwemasimende, izvo zvakapetwa kaviri muhukuru maererano nechizvarwa chekutanga chePolaris. Izvi zvinogadzirisa hutsika hunoita kuti system ishande zvakanaka uye inobvumira mutyairi wepikicha kuti asarudze nzira yakanakisisa yemhando ipi zvayo yekushandisa. Inosanganiswa nepamusoro-HBM2 yekuyeuka, izvi zvigadziro zvinobatsira kuderedza zvingave zvekuyeuka bunduwidth kuti zviite sekudzivirira kwe geometry kuburikidza.
Chimwe chezvinhu zvitsva zveNGOG yeVega zvinovandudzwa kuenzanisa kutengesa mukati mazhinji geometry injini. Munhu akangwara basa rekugovera distributor (IWD) anoramba achigadzirisa zvirongwa zvepipeline zvichienderana nezviratidzo zveraire iyo inowanikwa kuti iwedzere kushandiswa.
Chimwe chinhu chinogona kuita kuti magetsi ejometry asave asina kunaka mupfungwa kuchinja. Mamiriro ezvinhu anoshanduka apo pose injini inoshanduka kubva kune imwe shanduro kuenda kune imwe, yakadai sekuchinja kubva pakudhakwa kwechimwe chinhu kune chechimwe chinhu chakasiyana nezvinhu zvakasiyana. Nhamba ye data yakabatanidzwa nekupa hurumende inogona kuva yakakura kwazvo, uye kugadzirisa kweGPU kunogona kuvhara kana ichibuda kunze kwekuchengetedzwa kwemamiriro ezvinhu. IWD inoda kudzivisa kushanda kwepamusoro kuburikidza nekudzivirira mamiriro ekugadzirisa kana zvichiita.
Vamwe vanotora foni vanobatanidzawo maitiro mashomanana (kureva, ivo vanopa mimwe mitauro yakafanana yechinhu chakare). Kana chiitiko chisingatauri zvikwata zvakakwana zvokuzadza mberi kwetambo dze 64, saka haigoni kushandisa zvizere neGPU's parallel processing capability, uye zvimwe chikamu cheGPU chinokwanisa kusashandiswa. IWD inogona kuderedza izvi kuburikidza nekuisa mitambo yakawanda shomanana kusvika kune imwe chete, zvichiita kuti kuwedzerwa kushandiswa kushandiswa.
Gwaro Rinozotevera Compute Unit (NCU) ne Rapid Packed Math
GPUs nhasi inowanzoshandisa huwandu hwakawanda hwemasvomhu kupfuura hunodiwa kuhuwandu hwavanoita makore apfuura, GPU hardware yakagadzirirwa chete kugadzirisa maitiro ekutenderera kwepamberi ye32-bit yakanga yashandiswa mufananidzo we3D. Zvisinei, sekushandurwa kweenjini kwave kwakave kwakanyanyisa-uye sezvo huwandu hwekushanda kweGPUs hwakapfuurira kunze kwekugadzirisa maitiro-kukosha kwemhando dzemhando kupfuura FP32 yakakura.
Iyo yakagadziridzwa kuverenga mauniti (Mufananidzo 7) pamwoyo ye Vega GPUs yakagadzirirwa kutarisa nyika ino inochinja nekuwedzera kwechimwe chinhu chinonzi Rapid Packed Math. Kutsigira kweC16-bit yakazara mathemoni maviri epamusoro yepamusoro-svetuka-kureva uye intekiti yepamusoro maererano ne32-bit. Inogadzirisawo nzvimbo yekuregeresa nzvimbo pamwe chete nekufambisa kwedhina kunofanirwa kushandura nhamba yakapiwa yemabasa. Mirayiridzo mitsva yakagadzirirwa inosanganisira kugoverana kwakapfuma kwekambiso kweC16-bit uye mirairo yakawanda, kusanganisira FMA, MUL, ADD, MIN / MAX / MED, zvinyorwa zvishoma, kushambadzira, nezvimwe zvizhinji.
Nezvikumbiro zvinogona kujekesa izvi, Rapid Packed Math inogona kukurudzira zvakanyanya mukuenzanisa kushandiswa kwezvinhu uye simba rekushandisa. Muzvinyorwa zvekushandisa zvakadai semichina yekudzidza nekudzidzira, mavhidhiyo ekugadzirisa, uye maonero emakombiyuta, 16-bit data yemhando yakakwana yakakwana, asi kune zvikomborero zvingave zvakakonzerwa nekushandura kwemitambo, zvakare. Mitambo yemazuva ano, somuenzaniso, shandisa zvakasiyana-siyana zvemashoko ezvinyorwa muwedzere kune F standard FP32. Kazhinji / kutungamirira vecherechedzo, magetsi, mavara, HDR mavara mavara, uye zvinhu zvakakanganiswa ndeimwe mienzaniso yekuti 16-bit maitiro anogona kushandiswa.
Nekuvhengana-kunyatsotsigirwa kutsigira, Vega inogona kukurumidza kushanda iyo isingabatsirwi nepamusoro yakarurama apo ichichengetedza zvakakwana kune izvo zvinoita. Nokudaro, kubudirira kunoitwa kunowedzerwa hakufaniri kuuya pamutengo wemufananidzo unhu.
Mukuwedzera kune Rapid Packed Math, NCU inotanga zvakasiyana-siyana zvezvinhu zvitsva zve 32-bit zvinogona kuvandudza kushanda nekubudirira mune zvimwe zviitiko. Izvi zvinosanganisira sarudzo yechisere kuti iwedzere kuchema kwekodzero yekuzvarwa uye hashing mabasa (inowanzoshandiswa mu cryptographic processing uye cryptocurrency migodi), uyewo itsva AOD / SUB mirayiridzo yakagadzirirwa kuderedza kushandiswa kwerejistisi.
ICU inotsigirawo zvakasarudzwa zveA8-bit integer SAD (Sum of Absolute Differences). Aya maitiro anokosha pane zvakasiyana-siyana zvevhidhiyo uye zvigadzirwa zvekugadzirisa maitiro, kusanganisira kuenzaniswa kwemavara kumakadzi ekudzidza, kufamba kwekufamba, kubvuma chiratidzo, kushandiswa kwemaitiro stereo, uye kuonekwa kwekombiyuta. Mutemo weKSAD unogona kuongorora 16 4 × 4-pixel mataresi neCUU nenguva yeawa yega uye kuunganidza zvigadziriswa ku32-bit kana 16-bit registers. Shanduro yakajeka (MQSAD) inogona kupa huwandu hwekugadzirisa kuburikidza nekuregeredza mapikisi eseri uye kuisa kuverenga kuzvinhu zvekufarira mufananidzo.
Revised Pixel Engine
Sezvo kusarudzwa kwe-ultra-yakakwirira uye yakakwirira-refresh zviratidzo zvinowanda kupararira, kuwedzera kupikisa kwepikisi kunowedzera kukoshesa Vatariri ne 4K + zvarudzo uye kuvandudza mitengo kusvika ku240Hz zvinowedzera zvakanyanya zvinoda maGPUs anhasi. Iyo injini yepikisi mumugwagwa weVega yakagadzirirwa kutarisana nemirairo iyi nemhando yezvinhu zvitsva.
I-Draw-Stream Binning Rasterizer (DSBR) inokosha innovation kusimbisa. Yakagadzirirwa kuderedza kusakosha kwekugadzirisa nekuwedzerwa kwemashoko paGPU, iyo inobatsira zvose kusimbisa kushanda nekuderedza kushandiswa kwesimba. Pfungwa iyi yaisanganisira kubatanidza zvibvumirano zvekambani yakatove yakashandiswa zvakanyanya muzvigadzirwa zvemifananidzo zvinoshandiswa (maitiro akaiswa mumataundi) pamwe nemigumisiro yekushandura-mode mode inoshandiswa mukushanda kwepikicha PC.
Purogiramu yakashandurwa-inogadziridza inoshanda nekugadzirisa imwe sendigoni sezvainotumirwa kusvikira nzvimbo yacho yose yapera, asi kushandiswa kwetiyeri kunoshanda kuburikidza nekuparadzanisa chinyorwa mumugero wematare uye zvino kugovera tile imwe neimwe zvakasununguka.
Iyo DSBR inoshanda nokutanga kugovana chifananidzo ichizoshandurwa mu gridhi yemabheni kana matani munzvimbo yekona uye zvino kuunganidza bhitimendi yezvinyorwa kuti dzigadziriswe mushanduri ye scan. Iyo ibhini uye mabhesi mashoma anogona kugadziridzwa zvakasimba kuti agone kushandiswa kwezvakagadzirwa zvichishandurwa. I-DSBR inobva ichiyambuka iyo yakagadzirirwa mabhinhi imwe ibhi panguva imwe, ichiona kuti ndeiyo yakazara kana chikamu yakafukidzwa nebhin. Geometry inoshandiswa kamwechete, inoda imwe nguva yevhavha yega yega yepayipi. Hapana mitezo iyo kubhinja kunogona kubvumira, uye inonyatsoenderana ne tessellation uye geometry shading.
Izvi zvinogadzirisa-chip chip memory bandwidth nekuchengeta zvose data zvakakosha kuti dzigadzire geometry nokuda kwebhin inokurumidza pa-chip memory (kureva, iyo 12 cache). Dhiyabhorosi mu-off-chip memory inongoda kuwanikwa kamwe chete uye inogona kushandiswa zvakare isati yaenda kune ibhi rinotevera. Vega inoshandisa nhamba shomanana yematombo, uye inoshanda pamakakatanga ekare emadiki mashoma kana achienzaniswa neaya anoshandiswa mumapurakiti emapurisa ekutenderera kare. Izvi zvinogadzirisa mari inobatanidza nekucheka nekugadzirisa kushandiswa kwezviitiko zvakaoma paunenge uchitisa zvizhinji zvekushanda nekubudirira zvinobatsira.
Pixel shading inogonawo kuderedzwa kusvikira batch yose yakashandurwa kuitira kuti zvionekwe zvisikwa zvepamberi zvinotaridzika zvidikanwe zvinofanira kuvharidzirwa. Iyi nhanho inoderedzwa inogona kuvhiringidzwa kusarudzwa kwematche ane polygoni ane pachena. Shading yakasarudzwa inoderedza basa risingakoshi kuburikidza nekuderedza kudarika (kureva, matambudziko apo pixel shaders inourawa kakawanda apo mapurogoni akasiyana anowanikwa pikisi rimwe chete).
Kunyoreswa pixel processing inoshanda kuburikidza nekushandisa mapikicha emashizha emirasi vasati vaita pixel shaders pavari. Kana imwe sampuro inotevera ichinyanya kana ichidarika sampuli yapfuura, sampuro yapfuura inogona kurasikirwa musati chero ipi neipi ye pixel yaitwa pairi. Ikobhobho ine zvishoma zvakadzika, saka inesimba zvikuru kana ishandiswa pamwe chete ne binning.
Izvi zvinogona kuderedza zvikuru-chip chip memory traffic, kukurudzira kushanda mumamiriro ekurangarira-kukanganisa uye kuderedza kushandiswa kwemagetsi ekushandisa simba. Mune nyaya ye Vega desktop GPUs, takacherechedza kuchengetwa kwepachimbichikiti chekudzivirira kusvika kusvika ku33% apo DSBR inobvumira kushandiswa kwemitambo iripo, pasina kuwedzera kwesimba rekushandisa.
Inovakwa neGPU Clock Speed ​​yakakwirira
Imwe yezvinangwa zvakakosha zvekuvakwa kweVega kwaiva nekukwirira kwekushanda maawa maawa kupfuura chero Radeon GPU yaive yapfuura. Taura zviri nyore, kuedza uku kwakada kuti mapoka ezvigadziro apfigire pane zvakakwirira zvinowanzoitika. Kunyoresa kwemashoko iwayo kunobatanidza kuwanda kwebasa racho, kunyange zvakadaro. Kusangana neVevga zvakakosha zvakanyanya zvinangwa zvinoda humwe hutano hwekugadzirisa maitiro kune zvikamu zvose zvechi chip.
Mune zvimwe zvikamu-somuenzaniso, mukunyora kudengesa dzira nzira yeII cache-mauto aya akawedzera mamwe matanho pipayipi, kuderedza kuwanda kwebasa rakaitwa muvharo rega rega kuitira kuti vaone zvinangwa zve Vega zvakanyanya nguva.
Kuwedzera zvikamu inzira dzakawanda dzekuvandudza kushivirira kwemazuva mazhinji kwekugadzira, asi iyo zvikamu zvinowedzera zvinogona kuwedzera mamwe latency kune pipeline, zvinogona kuchinja kushanda. Muzviitiko zvizhinji, zvinopinda izvi zvinogona kuva zviduku. Muchivaraidzo chekunyengedzera, muenzaniso we latency unogona kuwedzera kusvika maawa maviri maawa kubva kumazana aidiwa kuti aite zvinyorwa-kutadza kuita.
Mune dzimwe mamiriro ezvinhu, pane dzimwe nzira-dzinokosha, chirongwa che Vega chaida kugadzira zvirongwa zvekugadzirisa hutano hwakanaka hutano hunoenderana nekushanda kweawa. Tora, somuenzaniso, nyaya ye Vega NCU, boka rakagadzirisa rakachinja zvikuru kune chikwata chekugadzirisa chikwata chekugadzirisa kushivirira kwayo nguva refu pasina kukanganisa kushanda kwaro kwekutanga.
Kutanga, boka racho rakashandura chirongwa chepasi chepakati chekuverenga chikwata. Mumagadzirirwo eGCN anotangira ane zvishoma zvisingagadziri zvinowanzoitika, kuvapo kwehutano hwehutano hwehumwe hurefu hwakagamuchirwa nokuti zviratidzo zvinogona kufamba rwendo rwakakwana muawa imwe chete. Nokuda kweizvivakwa, dzimwe dzemafurati akareba dzinofanira kuderedzwa kuitira kuti zviratidzo zvingapedzisira zvichipfuura mukati memazuva eVega zviduku zviduku zviduku. Kushandurwa uku kwaida shanduko itsva yemuviri weVega NCU ine chirongwa chepasi chakagadziridzwa kuita kuti tambo shoma shoma iwedzere.
Iyi shanduko inoshanduka yoga yakanga isina kukwana, zvakadaro. Zvikamu zvemukati mairi, semirayiridzo, kutora nekugadzirisa manzwiro, akavakwazve nechinangwa chakanaka chokusangana nemagariro eWega anowedzera nguva. Panguva imwecheteyo, boka racho rakashanda zvakaoma kuti rirege kuwedzera zvikamu kune nzira dzakawanda dzinoshandiswa-dzinotsvaga. Pakupedzisira, vanogona kuswedera pamagadzirirwo anochengetedza hupamhi hwemawere mana eEUU pipeline uye achiri kusangana neVega nguva dzenguva.
Vega zvakare inoshandisa high-performance SRAMs tsika yakatanga yakagadzirwa neZen CPU team. Iyi SRAMs, yakashandurwa kuti ishandiswe mune zvinyorwa zvezvinangwa zveVega NCU, inopa kuvandudzwa pamiganhu yakawanda, nekunonoka kwe 8%, ne18% yekuchengetera munzvimbo inouraya, uye kuregererwa kwe43 kwekushandisa kwemasimba zvichienderana nezviyeuchidzo zvakagadziriswa .
AMD Ryzen APU Topology
Kushandisa iyo Zen, Vega, uye Infinity Fabric technologies inotsanangurwa muchikamu chakapfuura, AMD Ryzen Processor neRadeon Vega Graphics inoshandisa chimiro chemuviri chinoratidzwa pasi (Mufananidzo 10). The Infinity Fabric mazano matanhatu akasiyana nevatengi vanomiririra zvikamu zvakasiyana-siyana zvekombiyuta mune AMD IP portfolio. Ava vatengi vanoongororwa nechekare uye vanotungamirirwa kuburikidza nedata / kutarisa zvigadziro zvejasi.
Pasi pfupfu yakafa yeRaven Ridge APU yakaenzaniswa neR Ryzen CPU.
AMD Raven Ridge APU Die Shot
Pasi pane mimwe mifananidzo kubva pakachengetwa kwandakagamuchira kubva ku AMD uye kuiswa kwezvigadzirwa zveNyzen APU itsva. Sezvo iwe uchigona kuona APU uye iyo inononoka mumwe nomumwe ane zvinyorwa zvake. Iyo yakareba bhokisi ye APU iyo AMD yave ichishandisa kwechinguva uye kadhibhodhi bhokisi yakafanana zvikuru neyakonhora.
Zvadaro pane mifananidzo yeRenzen APU samples tine. I-APUs inotunganidzwa mumutambo wakajairika kubva ku AMD ine sleeve yepurasitiki mukati mekidiki kadhibhodhi bhokisi uye inosanganisira ibheji rinoreva Ryzen 5 kana Ryzen 3 zvichienderana neAppU mukati. Kuenderera mberi kune Wraith Spire CPU cooler, ndinogona kuti ichachengeta Ryzen 5 2400G mukati mevupurupiti yayo yehutachiona pamakumbo epamusoro asi iyo inosvika pakufamba kwayo. Munguva yekupedza kuongororwa, APU yaizosvika kumadziririro pakati pemakore makumi masere uye ichiri pasi pemiganhu ye-95 ° C asi inoderedza tarisiro yekupfekedza kure pane nzvimbo inotonhora. Zvaivawo zvisinganzwisisiki kuisa, asi sezvaunogona kuona inotakura TIM inoratidza kugoverwa kwakanaka kweHS uye paive nemari yakakwana yakagara ishandiswa.
Pakati pezvibvumirano, ndaida kupa APUs zvakajeka kuzunungusa muzana ravo rekuyera asi ini chete CPU yandaive nayo neIntel UHD 630 mifananidzo yaiva 8700K nhanhatu yepisiti gumi neipi yeCU iyo inowedzera kaviri mutengo wekutengeserana we Ryzen 5 2400G. Saka ndakagara pane i3 8350K iyo inotarisa pamatengo akafanana neA2400G APU asi ini ndakanga ndisina uye ndakanga ndisingadi kutenga imwe.
Kungofanirwa kujekesa ini ndiri kuedza kuva akanaka zvakakosha saka ndakatora i7 8700K yangu uye ndayideredza kusvika kumakona mana, nechina thread CPU ndokuiisa pa 4.0 GHz ne 3.7 GHz cache kutevedzera i3 8350K zvakanyanya sezvinobvira nezvose zvandinazvo. Muzvikamu zeruzhinji ndave ndakadudzira 8350K ne asterisk ndikawedzera mutsara wepamusoro uyewo ndichienda mberi ndichareva CPU se i3 8350K *
Ryzen5 2400G Ryzen 3 2200G A10-7870k i3 8350K *
Motherboard MSI B350I PRO AC MSI B350I PRO AC ASUS Crossblade Ranger ASUS ROG Strix X370-E Kutamba
ndangariro G.Skill FlareX 2 × 8 GB DDR4-3200 MHz 14-14-14-34 G.Skill FlareX 2 × 8 GB DDR4-3200 MHz 14-14-14-34 G.Skill 2 × 4 GB DDR3-2400 10-12-12-31 G.Skill FlareX 2 × 8 GB DDR4-3200 MHz 14-14-14-34
HDD Samsung 120 GB 840 EVO Samsung 120 GB 840 EVO Samsung 120 GB 840 EVO Samsung 120 GB 840 EVO
Magetsi Super Flower 1000W Platinum Super Flower 1000W Platinum Super Flower 1000W Platinum Super Flower 1000W Platinum
iGPU Radeon Vega 11 Radeon Vega 8 Radeon R7 512 Shaders Intel UHD 630
kutonhora AMD Wraith Spire AMD Wraith Spire Noctua NH-D15 Noctua NH-D15
* i3 8350K = i7 [email inodzivirirwa] 4.0 GHz, mazai mana nemakumbo mana kuenzanisa i3 8350K
Muchikamu chekuongorora kubva ku AMD, tinowana zvikamu kubva Kucherov uye G.Skill nokuda kweRevzen APU kuongorora. Bhobhobhodhi yakabudiswa ndiyo MSI B350I PRO AC, iyo yakazara yakazara Mini-ITX AM4 motherboard uye RAM, iyo pato kubva kuG.Skill inosanganisira mbiri FlareX DIMM, iyi 2 × 8 GB kit inotaridzirwa DDR4-3200 pa 14-14-14-34. Nguva pfupi pashure pokunge Ryzen ichitanga gore rapera G.Skill yakabudisa FlareX ne Fortis RAM iyo yakanyatsongorongedzwa yeAXXUMUMX platform. Zvose zviri mukati mokudzokorora purogiramu zvinoratidzwa pasi apa.
Iyo MSI B350I PRO AC, sezvandakati i mini-ITX fomu factor AM4 mamaboard, musarega kukura kwayo kukupusa iwe. MSI yakazara zvinhu zvishomanana munzvimbo iyoyo duku. Bhodhi yakagadzirirwa chipsetsi yeB350 uye inotsigira ma AMCNUMX CPUs akawanda ikozvino. Ini ndakacherechedza zvisinei kuti Ryzen 4 7X yakanga isiri pane urongwa hunokonzerwa neTDP kudziviswa. Izvozvi DRAM mbiri dzichatsigira kusvika ku 1800 GB yeDDR32 mumugwagwa weviri unomhanya kusvika ku4 MHz. Pane imwe PCIe 3200 x3.0 slot mubhodhi uye naMXXUMUMX connector kumushure inotsigira PCIe 16 x2 uye SATA NVMe inotya. Aya maPCI ekufambisa anokurumidza kuenderana neC CPU yakashandiswa. NeyeRenzen CPUs vanomhanya zvakakwana asi nemitambo yakaderedzwa muAppU ivo vose vari kuderedzwa kusvika hafu iyo PCIe 3.0 x4 uye x3.0 maererano. Iyo MSI PRO AC inewo USB 8 Gen2 connectivity, HDMI, uye Display Port output uye inosanganisira Intel dual-band wireless / Bluetooth.
Zviratidzo zvose zvaiitwa nebhobhobhoyo yakagadzirirwa kugadziridzwa kusinganisirwa (kunze kwezvimwe zvirongwa zvekuyeuka zvaifanira kugadzirirwa nemaune). Apo "chikwata" chinotaurwa pamwe chete nehanho yeawa, izvi zvinosanganisira kuwedzera zvakakwana 2 pane AMD Ryzen APUs. Ndakaedza nzira iyi kuti ndicherechedza AMD yakagadziriswa Precision Boost 2 uye kuti inoshandisa sei mukana weawa kana iri pasi pemitoro yakasiyana. Ndinodawo kudzokorora zvakare kuti ndakashandisa 8700K yakabatanidzwa kusvika kune ye 8350K yepamusoro yehutano yakagadzirirwa pachitinho chetambo cha 4 GHz nemakumbo mana nemakumbo mana. Zvose zviri mubhokisi mafirimu zvakasara pamatokari ekutengesa.
Mushure mekuedzwa, ndinoisa AMD APUs kune yavo yakawanda overclock yeCUU neGPU yandingakwanise kuwana paMSI motherboard. Ndakaona kuti ine zvimwe zvisingakwanisi kupera nemhepo kuitira kuti ini ndikwanise kuenda zvakadaro. Izvi zvichakupa pfungwa yezvinobudirira zvinogona kubudirira zvinogona kuva nazvo kana ukasarudza kuvhara pasi APU. Chiyeuchidzo chakachengetwa pamakanho akakwana kweFlareX DDR4 kit.
Mimwe miedzo yemutambo yaidhindwa pa 1920 × 1080 pazvinhu zviduku zvekugadzirisa zvigadziro uye kuonekwa kuti V-Sync yakabviswa.
3DMark Fire Urayai
Middle Earth: mumvuri Mordor
Metro Chiedza chekupedzisira
Kungoita chinyorwa apa, ndakashandisa AIDA64 Engineer Beta yakapedzisira kuongorora asi haisi kutsigira zvakakwana Ryzen APU. Chokutanga ndecheAIDA64 cache uye chiyeuchidzo chekuyeuka.
AIDA64 Cache uye Memory Benchmark
Ryzen 5 2400G @ 3.6 GHz 46981 47573 41578 68.8
Ryzen 3 2200G @ 3.5 GHz 46750 47660 41652 67.3
Intel i3 8350K * @ 4.0 GHz 47089 47755 42998 44.6
AMD A-10 7870K @ 3.9 GHz 22236 12393 21413 77
Sezvaunogona kuona Ryzen iri kushanda zvakanaka zviri nani negondohwe kupfuura gore rakapfuura asi kuti latency ichiri yakakwirira kwazvo pakuenzanisa neIntel. Enda mberi kweAIDA64 CPU zviratidzo.
AIDA64 CPU Miedzo
CPU mambokadzi PhotoWorx Zlib AES Hash
Ryzen 5 2400G @ 3.6 GHz 46989 18366 356.4 33069 11308
Ryzen 3 2200G @ 3.5 GHz 30895 13768 228.1 29018 7335
Intel i3 8350K * @ 4.0 GHz 36091 26878 285.2 17698 4375
AMD A-10 7870K @ 3.9 GHz 18809 9791 175.3 8685 2745
Sezvaunogona kuona tsvina ina dzakapiwa akapa 2400G mukana wakanaka kuburikidza nehuwandu hwekuongorora kweCUU uye 2200G yakanga isiri iyo yose iri kumashure. Kuenda kune wekupedzisira yeAIDA64 zvikwereti.
AIDA64 FPU Miedzo
Ryzen 5 2400G @ 3.6 GHz 6170 19247 10051 6362
Ryzen 3 2200G @ 3.5 GHz 5786 18411 9588 4367
Intel i3 8350K * @ 4.0 GHz 6611 33031 18289 3391
AMD A-10 7870K @ 3.9 GHz 3788 6240 3184 1484
Izvo zvinotenderera zvinotaridzika zvinoita sechinhu chiduku chinzvimbo chisina simba cheR Ryzen based APUs kunyange nehurukuro dzakawedzerwa iyo 2400G yakasara kumashure mune zvose asi Test SinJulia.
Zvadaro, tichaenderera mberi pane chimwe chinhu chinonyanya kuoneka / kubereka zvichienderana nekugadzirisa, kupa, uye kukodhidza mararamiro.
Ryzen 5 2400G @ 3.6 GHz 9.23 826 1702.86 19.84 21913
Ryzen 3 2200G @ 3.5 GHz 6.66 585 1374.92 17.04 16115
Intel i3 8350K * @ 4.0 GHz 7.82 683 1665.39 27.13 19203
AMD A-10 7870K @ 3.9 GHz 3.71 326 857.51 9.32 11912
Panozve, tsvina dzakapiwa dzakapa 2400G zvishoma kubatsiri pane Intel CPU mune zvose asi HWBot's X265 chiratidzo. Chizvarwa chekupedzisira cheIntel CPUs chakagadziriswa chaiyo pachiratidzo ichi kana chienzaniswa nevatungamiri vavo.
Kufambira mberi kubva kune kunaka kwose kwakanyanyisa pamusoro, tinosvika kune imwe Pi uye Prime number based tests. SuperPi uye WPrime, kunyanya. Kunyange zvazvo AMD haina kunyanya kusimba muzviitiko izvi unogona kuona kune hukuru hukuru pane vamwe vavo veStamroller.
SuperPi uye wPrime Benchmarks
Ryzen 5 2400G @ 3.6 GHz 11.066 625.307 6.425 181.54
Ryzen 3 2200G @ 3.5 GHz 12.114 671.124 8.863 271.828
Intel i3 8350K * @ 4.0 GHz 9.141 461.783 6.939 221.602
AMD A-10 7870K @ 3.9 GHz 17.891 957.549 12.298 392.797
Sezvo kumitambo yacho ichienda, kuedzwa kwakaitwa pa 1080p uye pasi presets. Izvozvi APU zvinoshandiswa kuti zvive zvisingakwanisi zvese-mu-imwe sarudzo kuitira kuti kutamba isasi chinangwa chavo chikuru asi sezvamuchaona ichikanganisika neyakagadzikana kwemafaira. Kune vatambi kunze uko, iwe zvechokwadi haunganyadziswi nekushanda kweRadeon Vega graphics!
Kana iri iyo yakagadzirwa, 3DMark Moto Strike, unogona kuona mitsva yakafanana neyeri iri pamusoro neVega graphics inodhonza mune dzimwe nhamba dzinoshamisa dzeGPU.
Mashoko mashomanana pamaonero angu ekuvandudzirwa kweAmdi kwakagadzirisa basa. Chokutanga pane iyo inoita nenzira yakasiyana pane yekutanga iyo inonzi Precision Boost. Ini ndichatanga neRenzen 3 2200G sezvo maCCU maviri akazvibata zvakasiyana kubva kune mumwe. I2200G ine maawa ekutanga e3.5 GHz uye inosimudzirwa ku3.7 GHz uye kubva pane zvandakaona yakaramba iri pamusana wayo wekuwedzera kwepamusoro pamativi ose mana kunyange pasi pemitoro yakaremara yakadai seCinebench R15 kana HWBot x265. Pakati pekushanda kwetambo imwe chete, iyo yaizosimudzira imwe kana kuti yakawanda kusvika ku3.7 GHz asi mutoro wakaonekwa kuti unofamba pakati pemakumbo akasiyana-siyana, zvaiita sokuti yakanganisa. Ndakadzoka uye ndikaisa ukama kune imwe chete yekuti saka ndiyo chete yakasimbisa, iyo yakagara yakamira pa 3.7 GHz munguva yechiratidzo chakazara asi chienzanidzo chakawana zvakafanana naizvozvo mufambiro wezvikwata hauna kukanganisa mugumisiro.
Iyo Ryzen 5 2400G yakaita zvishoma zvakasiyana pakuti haina kusvika pakuwedzera kwepamusoro pamakumbo ose panguva yakaoma, mitithreaded mitoro asi yaizosimudzira kubva pachigadziko che 3.6 GHz uye ichikwira pakati pe3.75 GHz ne3.8 GHz. Pakati pemazuva ekureruka, yakaita, zvisinei, inosvika pakuzadza kwayo nguva yeHNUMX GHz.
Nokupfekedza kwepamusoro ini ndakashandura kupisa kubva kune yaisanganisira Wraith Spire kusvika kuNoctua NH D-15. I2400G yakanga isati yave pedyo nemigero yayo inotonhora inomhanya pamatombo pamwe nesimbi inotonhora. I2200G, kune rumwe rutivi, yakanga ine zvinyorwa zvepamusoro uye ini ndakakwanisa kuedza kugadziriswa ku4.1 GHz neyaisanganisira Wraith Spire cooler iyo yakanga yakashamisa, kutaura zvishoma. Ndakaedza kuitamba neNoctua cooler asi zvakare ndakamhanyira kumucheto webhobho rebhobho raisazobvumira kuti ndigadzire mhepo yepamusoro pamusoro pe1.4V. Izvo zvingadai zvakave muenzaniso wangu asi Ryzen 5 2400G yakanga yava pedyo nemiganhu yayo kunyange nekunatsiridza kunatsiridza. Ini chete ndakakwanisa kuwana 3.95 GHz max ye core CPU uye 1350 MHz pamusana weGPU. Yakanga yakanyatsogadzikana pane izvi zvigadziri asi ini chaizvoizvo handina kuwana mifananidzo yekuvandudza kwandaitarisira. Sezvauchaona mumigumisiro yemigumisiro inotevera chete yakagadziridzwa imwe kana maviri mafaira kwechipiri. Iyo Ryzen 3 2200G yakaita kunge ine zvakawanda zvepamusoro. Ndakagadzirisa 4.1 GHz nokuda kweCIN core uye 1300 MHz yeGPU core uye inongoda kuwedzera zvishoma kune SOC / NB mhepo kuti iwane 200 MHz iyi kubva APU.
Saka regai tione kuti vakagadzika sei.
Mumufananidzo uri pasi apa takaedza kushandisa simba rehurongwa mumamiriro ezvinhu akawanda kubva zvisina maturo, kuenda kune Prime 95 Small FFT (neFMA3 / AVX) ku3DMark Firestrike nokuda kwekutakura mutoro. Nzira yacho, pane zvayo, yakanga ichikwevera huwandu hwa 104 W weC CPU chete mamiriro ezvinhu ne 2400G uye 2200G yakaiswa kunze kwe93 W zvose izvi zvakawanikwa kubva kuTrange 95 duku FFT yokuedzwa. Kunyangwe kana kuputika kwe 2400G kuchiita chete ku 122 W uye 93 W ye 2200G pa 4.1 GHz. Ramba uchifunga izvi zvakazara mashandisirwo emagetsi ekushandisa, aya CPUs anonyatsopisa magetsi.
Ryzen APU Power Consumption Stock
Mafuta ainyanya kushamisika akachengetedzwa zvakanaka pamwe newainyorwa Wraith Spire cooler, handina kuona kuvhara chero chero nguva. Iyo yepamusoro yepamusoro apo paitengesi yaiva 85 ° C neRenzen 5 2400G, panguva ya Prime95 Small FFT. Izvi zvinoratidza kuti nzvimbo inotonhorera yakakwana ye2400G pamigodhi yezvikwata asi haikwanise kuchengeta panguva yekuvhara. Nokuda kweRenzen 3 2200G yakashanda zvakanaka kusvika ku4.1 GHz iri pasi pekuongororwa kwepfungwa iwe CPU yaisvika uye ichidarika zvishoma 90 ° C munguva yekuongorora kweP95 shoma FFT asi zvose zvaunoda.
Pasi pose, kushanda kubva kuAmd kuwedzera kutsvaga kumagariro e Ryzen kunoshamisa. Kana vachizvienzanisa navo neA10-7870K, kubva kune imwe nzvimbo yekomputa pane iyo haisi kukwikwidza uye maikirwo emashandiro anenge asvika kaviri. Kutarisa pamatare uye madhora eRenzen 5 2400G akafananidza zvakanaka zvikuru ne8350K iri mubhokisi rimwe bhiza, mutengo wakachenjera, neMSRP ye $ 169.99. Iine tsvina ina ina kuti ibatsire mune mitambo yakasiyana-siyana yakashongedzwa uye purogiramu yakanaka yakaisvonaka yeprojeksi kana iwe unonzwa uchida kukanganisa uye uchiita mamwe mabheji. Somunhu, ndinonzwa mudiwa chaiye i $ 99.99 Ryzen 3 2200G uye ini handingashamisi kuona ichiratidzwa mune zvakawanda zvemaOEM munguva inotevera.
Ndinofunga kuti AMD yakarova misungo iri mumusoro panguva ino, idzi mbiri dzeCUU dzinokodzera misika yavo yakatarwa segorove. Vari kupa zvinhu zvakanakisisa zvenyika mbiri uye basa guru risingazoputsi bhangi. Overclockers Yakagamuchirwa!
AMD Ryzen 5 2400G uye Ryzen 3 2200G APU Review inzvimbo kubva: Overclockers - The Performance Computing Community
Ryzen 3 2200G / Ryzen 5 2400G kudzokorora: katatu-A kutamba pasina kadhi kadiki?
AMD Ryzen 9 5980HS Cezanne Ongororo: Ryzen 5000 Nhare Yakaedzwa
Filed Under: disable telemetr